Waa maxay Farqiga u dhexeeya Gelato iyo Cream-ka?
Gelato waa erayga Talyaaniga ee jalaatada , sax? Ma jiraan wax kala duwan oo u dhexeeya gelato iyo jalaato?
Haddii aad mar uun booqaneysey Talyaaniga, waxaa laga yaabaa inaad dareentay jimicsi, gelato delicious. Waxaa laga yaabaa in aad u maleyneyso in sababta kaliya ee ay u muuqatay mid aad u liidata oo aad u xoog badan oo dufan ah marka loo eego dufanka Maraykanka dib u noqoshada sababtoo ah waxaad ku raaxaysatay lugta Spanish Steps ee Rome, halkii aad ku fadhiisan lahayd sariirtaada guriga.
Laakiin waxaa jira runtii dhowr waxyaabood oo waaweyn oo u dhexeeya gelato iyo jalaatada. Si aad u ogaato, waxaan waydiiyay Alon Balshan, oo ah Alon's Bakery iyo Market in Atlanta, kuwaas oo gelato si dhakhso ah u noqdaan kuwa ugu caansan ee ka mid ah saaxiibada la qaboojiyay.
Alon ayaa ii sharxay in inta uu kiriimku si sharci ah u leeyahay 10% dufan, gelato waxaa la sameeyaa saamiga weyn ee caanaha oo dhan kareemka, sidaas darteed waxa ku jira wax ka badan shan ilaa toddoba boqolkiiba dufanka.
Laakiin ha filanin in aad awoodi kartid inaad soo qaadatid natiijooyinka macmiilaha Talyaaniga adoo samaynaya cunto macaan ee gelato mashiinka jalaatiga ee gurigaaga : Alon ayaa sidoo kale sheegay in sababtoo ah gelato waa la jajabiyay xawaare ka jaban marka loo barbardhigo jalaatada, waa cufnaanta sababta oo ah hawada isku dar ah. (Gelato waxaa ku jira 25 ilaa 30 boqolkiiba hawada, halka kareemku ay ku jiri karto ilaa 50 boqolkiiba hawada) Ugu dambeyntii, halka barafka sida caadiga ah loo adeegsado barafka, gelato waxaa sida caadiga ah lagu kaydiyaa oo u adeegaa heerkul yar oo kulul, 15 ° F, sidaa darteed ma aha mid gebi ahaanba barafoobay.
Maxaase kale, halka jamacada jilicsan ay ku orodaan geedka ( Dufanka Ovaltine Dufan ama Rice Bread Ice Cream leh Cunto Cayayaanka iyo Caramel , qof kasta?), Waxaa jira dhowr dhadhan oo qaas ah oo aad ka heli doonto qaabka gelato: vaniljon, shukulaato, faarax, iyo stracciatella (vanilla leh shukulaato qallalan), si loogu magacaabo dhowr.
Si aad u sameyso gelato dhabta ah ee guriga, waxaad isticmaali kartaa De'Longhi ee guriga gelato guriga, kaas oo leh dhisme kombuyuutar ah oo qarxa isku dhafka iyada oo aan la isticmaalin baaquli hore loo qaboojiyey. Akhri dib u eegida De'Longhi Gelato Maker .
Alon waxa uu yidhi, "Maadaama aysan jirin baruur badan oo gelato ah, maaha mid si isku mid ah u duudduuban, sidaas darteed dhadhanka ayaa aad u xoog badan."
Laakiin hal jeermis jilicsan iyo gelato ayaa leh mid caadi ah: ma awoodi doontid inaad iska caabbid kaliya hal kabar dheeraad ah!
Macmacaan Vanilla Dufan
Talooyin loogu talagalay Samaynta Cagaarka Dheecaanka
Caramel Ice Cream oo leh Saliida Saliida ah
Shukulaatada shukulaatada shimbiraha Foostada shimbiraha
Talooyin ku Saabsan Cabbitaanka Dambiga Guriga
Casriicda Casriga ah ee Casriga ah
Farqiga u dhaxeeya Macmacaanka Cuntada leh ee kala duwan
Ereyada macmacaanka la qaboojiyey
Wabiga Wabiga leh Dhaqdhaqaaqa Dhirta
Sida loo Isticmaalayo Capers ee xayawaanka
Ka foojignow Acid: Habka Waaweyn ee Lagu Joojiyo Jagermeister
Digaagga Dumarka ah Cacciatore
Fikradaha Maqaayada Mexico
4 Saladhda Xagaaga iyo Lettuce Wax Leh
25 Roodhafka delicious for Brunch Spring Brunch ah
Makhaayadaha iyo Vegan Baked Beet Casserole
Ribsiyada Thai Barbeque